လာဇရုနှင့်ချမ်းသာသောလူသား - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > လာဇရုကိုများနှင့်သူဌေး
မယုံကြည်သူအဖြစ်သေလွန်သူများကိုဘုရားသခင်မရောက်ရှိနိုင်တော့ဟုသင်ကြားဖူးပါသလား။ ၎င်းသည်သူဌေးနှင့်ဆင်းရဲသောလာဇရု၏ပုံဥပမာထဲမှတစ်ခုတည်းသောကျမ်းချက်တစ်ချက်အားဖြင့်သက်သေပြနိုင်သည်ကိုရက်စက်စွာဖျက်ဆီးတတ်သောအယူဝါဒဖြစ်သည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာပါကျမ်းပိုဒ်အားလုံးကဲ့သို့ဤပုံဥပမာသည်အချို့သောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးဤအခြေအနေတွင်သာမှန်ကန်စွာနားလည်နိုင်သည်။ အယူဝါဒတစ်ခုသည်အခန်းငယ်တစ်ခုတည်းအပေါ်အခြေပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းဆိုးရွားနေပြီး၎င်းမှာအဓိကမက်ဆေ့ခ်ျသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်တွင်ရှိနေစဉ် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူနှင့်ဆင်းရဲသားလာဇရု၏ပုံဥပမာကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြင့်ယေရှုဖော်ပြခဲ့သည် - ပထမအချက်မှာအစ္စရေးခေါင်းဆောင်များကသူ့အားယုံကြည်ရန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ဒုတိယ၊ ကြွယ်ဝမှုသည်ဘုရားသခင့်စေတနာ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟူသောလူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်အားချေပရန်ဖြစ်သည်။ မိမိအမတရားမှုကို၏။
သူဌေးနှင့်ဆင်းရဲသား လာဇရုပုံဥပမာသည် ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းပြုဆရာအုပ်စုအား ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သော အခြားငါးဦးတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည် လောဘကြီးကာ ငြိမ့်ညောင်းစွာ ယေရှုသည် အပြစ်သားများကို ကျွေးမွေးပြုစုကာ စားသောက်ပြီး စားသောက်ခြင်းဖြင့် ငြီးငွေ့လာခဲ့သည်။ သူတို့ (လုကာ ၁5,1 နှင့် ၆6,14) ပျောက်သောသိုးပုံဥပမာ၊ ဆုံးရှုံးသွားသောတစ်ပြားနှင့် ပျောက်သောသား၏ပုံဥပမာကို ထိုမတိုင်မီက ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့်၊ ယေရှုသည် အခွန်ခံများနှင့် အပြစ်သားများအပြင် ဒေါသထွက်စရာအကြောင်းမရှိဟု ပြောဆိုသော ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းပြုဆရာများက ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသက်တာသစ်ကိုစပြုသော အပြစ်သားအတွက် သာ၍ရွှင်လန်းကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုသည်။ မလိုအပ်သော အခြားကိုးဆယ့်ကိုးဦးကျော် (လုကာ ၁5,7 သတင်းကောင်း သမ္မာကျမ်းစာ။) ဒါတွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မရိုးသားသောဘဏ္ဍာစိုးပုံဥပမာဖြင့် ယေရှုသည် စတုတ္ထပုံပြင်သို့ ကြွလာတော်မူသည် (လုကာ ၁6,1စာ-၁၄)။ သူတို့၏အဓိကသတင်းစကားမှာ၊ သင်သည် ဖာရိရှဲများကဲ့သို့ ငွေကိုနှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖာရိရှဲများထံ တမင်တကာလှည့်၍ ယေရှုက၊ ဘုရားသခင်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို သိတော်မူ၏။ လူတို့၌ မြင့်သောအရာသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏ (း၁၅)။
ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပရောဖက်များက သက်သေခံသည် - ထို့ကြောင့် ယေရှု၏စကားများ - ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာပြီး လူတိုင်းသည် သူ့ကိုယ်သူ တွန်းအားပေးနေကြသည် (း၁၆-၁၇)။ သူ၏ဆက်နွယ်သောသတင်းစကားမှာ- ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာကို လူတို့တန်ဖိုးထားသောအရာကို သင်သည် အလွန်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာကို မယူမှတ်သောကြောင့်၊ သင်သည် သူ၏အယူခံဝင်ခေါ်ဆိုမှုကို ငြင်းပယ်ပြီး သခင်ယေရှုအားဖြင့် သူ၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိရန် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၈ တွင် ယုံကြည်ခြင်း၏ ဂျူးခေါင်းဆောင်များသည် ပညတ်တရားနှင့် ယေရှုကိုရည်ညွှန်းသော ပရောဖက်များကို စွန့်ပယ်ကာ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ လွှဲသွားကြောင်းကို ပုံဆောင်သဘောအရ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် (cf.Jeremiah 3,6) အခန်းငယ် ၁၉ တွင်၊ ယခင်ပုံဥပမာလေးခုတွင် ပေါင်းစည်းထားသည့်အတိုင်း၊ သူဌေးနှင့်ဆင်းရဲသား လာဇရု၏ဇာတ်လမ်းသည် ယေရှုသူတို့အား ပြောပြသည့်အတိုင်း စတင်ခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်းတွင်အဓိကဇာတ်ကောင်သုံး ဦး ရှိသည်။ သူဌေး (လောဘကြီးသောဖာရိရှဲများကိုဆိုလိုသည်)၊ ဆင်းရဲသောသူတောင်းစားလာဇရု (ဖာရိရှဲများကမထီမဲ့မြင်ပြုသောလူမှုအဆင့်အတန်းကိုထင်ဟပ်သည်) နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အာဗြဟံ (ဂျူးကမ္ဘာ၌ရင်ခွင်သည်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နောင်အနာဂတ်၌ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပုံဆောင်သည်။ )
ဇာတ်လမ်းကသူတောင်းစားသေဆုံးတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ သို့သော်သခင်ယေရှုသည်သူ၏ပရိသတ်များကိုအံ့အားသင့်စေသောစကားများဖြင့် ... သူ့ကိုကောင်းကင်တမန်များကအာဗြဟံ၏ရင်ခွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည် (း ၂၂) ။ ထိုအရာသည်လာဇရုကဲ့သို့သောလူ၌ဖာရိရှဲတို့ယူဆသောအရာနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်အားပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသောကြောင့်ဤကဲ့သို့ဆင်းရဲသောသူများသည်အတိအကျနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည်မှာသူတို့၏သေမင်းငရဲခံရပြီးနောက်နာကျင်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ယေရှုကသူတို့ကိုပိုကောင်းအောင်သင်ပေးတယ်။ မင်းရဲ့အမြင်ကအတိအကျမှားနေတယ်။ သူတို့ကသူ့အဖေရဲ့နိုင်ငံအကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့သူတောင်းစားကိုဘုရားသခင်အကဲဖြတ်တာနဲ့တင်မကဘဲသူတို့အပေါ်သူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့လည်းမှားခဲ့တယ်။
ထို့နောက်ယေရှုကအံ့သြစရာကိုတင်ပြသည် - သူဌေးသေဆုံးပြီးသင်္ဂြိုဟ်သောအခါသူတောင်းစားမဟုတ်သူသည်ငရဲ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်မော့ကြည့်လိုက်ရာအာဗြဟံသည်လာဇရုနှင့်အတူအဝေး၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သည်။ သူက၊ အဘအာဗြဟံ၊ ငါ့ကိုသနားတော်မူပါ။ လာဇရုကိုလက်ညှိုးထိပ်၌ရေ၌နှစ်။ ငါ့လျှာကိုအေးစေပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ဤမီးတောက်များ၌ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည် (း ၂၃-၂၄) ။
သို့ရာတွင်၊ အာဗြဟံသည် သူဌေးအား အောက်ပါအတိုင်းပြောခဲ့သည်– သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး လာဇရုလိုလူများအတွက် အချိန်မကျန်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုလူတွေအတွက် ကျွန်တော့်မှာ အချိန်တွေရှိနေပြီ၊ အခု သူကျွန်တော်နဲ့ အတူရှိနေတော့ မင်းမှာ ဘာမှမရှိဘူး။ - ထို့နောက် မကြာခဏ စကားစပ်မိသော ကျမ်းပိုဒ်ကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာပါ - ထို့အပြင်၊ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် ကြီးစွာသော ကွာဟချက်တစ်ခု ရှိနေပြီး ဤနေရာမှ သင့်ထံသို့ ဖြတ်ကျော်လိုသူ မည်သူမျှ ထိုနေရာသို့ မရောက်နိုင်သလို မည်သူမျှ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ မရောက်နိုင်ပေ။ ထိုအရပ်မှ (လုကာ ၁6,26).
ဒီနေရာကနေမင်းကိုဘာကြောင့်ပြောင်းချင်တာလဲလို့စဉ်းစားဖူးသလား။ ဒါဟာဘာကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေဆွဲခေါ်သင့်တာလဲဆိုတာကိုသိသာထင်ရှားပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဖက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလား။ သူသည်သားယောက်ျားကိုခေါ်။ ၊ ထို့နောက်သူကသူ့ထံသို့လာချင်သူများပင် - ကြီးမားသောကွာဟမှု၏ကြောင့် - ဒါလုပ်နိုင်မနိုင်ကပြောသည်။ ဤပုံပြင်၏အဓိကဖွင့်ဟချက်မှာအပြစ်သားများ၏အကျိုးအတွက်ဤကွာဟမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သူတစ် ဦး အမှန်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည် လာဇရုလိုသူများအတွက်သာမက၊ သူဌေးလိုသူများအတွက်လည်း အပြစ်သားအားလုံးအတွက် သားတော်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ (ယောဟန်၊ 3,16စာ-၁၇)။ သို့သော် ယေရှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသော ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းပြုဆရာများကို ပုံဆောင်သည့် ပုံဥပမာတွင်ဖော်ပြထားသော နိုင်ငံတော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူသည် မိမိကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သော အရာကို အခြားသူများ၏ စရိတ်စကဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုခကို ရှာဖွေခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုက သူဌေးက သူ့အစ်ကိုတွေကို ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် တစ်စုံတစ်ယောက်သတိပေးသင့်တယ်လို့ သူဌေးကိုမေးပြီး ဒီဇာတ်လမ်းကို ပိတ်လိုက်တယ်။ အာဗြဟံကလည်း၊ ကြားပါစေ။(း၂၉)။ ပညတ်တရားနှင့် ပရောဖက်များသည် သူ့အားသက်သေခံခဲ့သည်—သို့သော် သူနှင့်သူ၏ညီတော်များက လက်မခံကြောင်း သက်သေခံချက် (ယောဟန်၊ 5,45စာ-၄၇ နှင့် လုကာ ၂4,44-47) ။
မဟုတ်ဘူး၊ ခမည်းတော် အာဗြဟံက သူဌေးက ပြန်ပြောတယ်၊ သေလွန်သူ တယောက်က သူတို့ဆီ သွားပြီး နောင်တရကြလိမ့်မယ်။6,30) အာဗြဟံက၊ သူတို့သည် မောရှေနှင့် ပရောဖက်တို့၏စကားကို နားမထောင်လျှင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်မည်ကို သဘောကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ (း၃၁)။
ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်ရန် ကြံစည်သော ဖာရိရှဲများ၊ ကျမ်းပြုဆရာများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတို့သည်လည်း ပိလတ်မင်းသေဆုံးပြီးနောက် ပိလတ်ထံသို့လာ၍ ထမြောက်ခြင်း၏မုသာစကားမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းကြသည် (မဿဲ ၂။7,62-66) ယုံ​ကြည်​သူ​တွေ​ကို လိုက်​ရှာ၊ ညှဉ်း​ဆဲ​ပြီး သတ်​လိုက်​တယ်။
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းကင်နှင့်ငရဲကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြရန်ဤပုံပမာကိုမပြောခဲ့ပါ။ ယင်းအစားသူသည်ထိုအချိန်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုယုံကြည်ခြင်း၊ စိတ်နှလုံးမာကျောပြီးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူဌေးများအပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုရှင်းလင်းစေရန်သူသည်ပုံမှန်ဘ ၀ ကိုကိုယ်စားပြုပြီးဂျူးဘာသာစကားပုံများ (လူဆိုးများနှင့်အာဗြဟံ၏ရင်ခွင်၌ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ခြင်းအတွက်) ဤပုံဥပမာဖြင့်သူသည်နောင်တစ္ဆေနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျူးသင်္ကေတ၏ဖော်ပြမှုသို့မဟုတ်တိကျမှုအပေါ်ရာထူးမယူဘဲသူ၏သမိုင်းကိုသရုပ်ဖော်ရန်ထိုအမြင်အာရုံဘာသာစကားကိုရိုးရှင်းစွာသုံးခဲ့သည်။
သူ၏အဓိကအာရုံမှာ ကောင်းကင်နှင့်ငရဲ၌ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်းပြစွာ သိချင်စိတ်ကို ကျေနပ်စေရန်မှာ သေချာပေါက်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ဘုရားသခင်၏ နက်နဲသောအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ထုတ်ဖော်မည်ကို သူ၏စိုးရိမ်မှုဖြစ်သည် (ရောမ ၁6,25; ဧဖက် 1,9 စသည်ဖြင့်) အစောပိုင်းကာလများ၏ နက်နဲသောအရာ (ဧဖက် 3,4-၅) ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ခမည်းတော်၏ လူ့ဇာတိခံယူသော သားတော်ယေရှုခရစ်သည် သူ၏အထဲ၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာဦးအစကတည်းက သူကိုယ်တိုင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်။2. ကောရိန္သု 5,19).
ဂျေမိုက်ကယ် Feazell ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်